धुम्न जाऔं धरान भन्ने नारा सहित धरानको पर्यटनलाई प्रर्वद्धन गर्ने उद्धेश्यले निरन्त सञ्चाल हुँदै आएको धरान सडक उत्सव यसपाली पनि धरानमा हुने भएको छ । होटल एशोसिएसन अफ धरानको आयोजना यसपाली १५ औं धरान सडक उत्सव यही वैशाख २८,२९ र ३० गते तीन दिनसम्म हुनेछ । विगतका वर्षहरुमा जस्तै धरानको सडक उत्सव धरान १२ स्थित चतरालाइनको सडकमा तीनदिन सम्म हुने छ । यसै धरान सडक उत्सबको विषयमा आयोजक होटल एसोसिएसन अफ धरानका अध्यक्ष सरोज भट्टराईसँग औजार दैनिकले गरेको कुराकानी ः
१५ औं धरान सडक उत्सवको तयारी कस्तो छ ?
तयारी हामीले तीव्र पारेका छौं । विगतको जस्तो शान्पिूर्ण तरीकाले धरानमा सम्पन्न हुँदैछ । यो उत्सवले धरानको गरिमालाई उचो बनाउन थप सहयोग गर्नेछ । किनकी हामीले व्यापारको लागि मात्रै यो सडक उत्सव गरेका होइनौं । यो सडक उत्सव धरानको पर्यटनसँग जोडिएको छ । निरन्तर रुपमा १५ आंै सस्करणसम्म आइपुग्दा धरानको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिलेको छ । धरानको गौरबसँग जोडिएको सडक उत्सव भएकाले यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउँदै यसलाई सफल बनाउनको लागि हामी आयोजक संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी लागि परेका छौ.। तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने उत्सवको २८ गते उद्घाटन गरिदैछ । १ नम्बर प्रदेशका सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले दिउँसो ३ बजे उद्घाटन गर्ने तयारी छ ।
उत्सव अवधिभरी के–के हुन्छ ?
विगतदेखि नै हुँदै आएको कुराहरु नै प्राथमिकतामा छन् । सडक उत्सव भएकाले मुलतः खानपानमै प्राथमिकता हुनेछ । त्यसभित्र धरान बहुजातीय, बहुभाषिक र साँस्कृतिक सहितको बसोबास भएको स्थान भएकाले जातीय परिकारहरुमा यहाँ आउनेहरु जातीय परिकारको स्वादमा रमाउनेछन् । त्यसैगरि उत्सव अवधिभरी सस्तो बजारमा सञ्चालन हुनेछ । जहाँ आवस्यकीय घरायासी प्लाष्टिकका सामाग्री, लुगा लगायतहरु सस्तो बजारमा उपलव्ध हुनेछन् । साथै उत्सवमा यमाहाको शोरुम पनि रहनेछ । उत्सव अवधीभरी यसपाली ५० लाखको हाराहारीमा कारोबार हुने अपेक्षा छ , त्यसमा यमाहाको अपेक्षाकृत विक्री वितरण भएमा एक करोडसम्म कारोबार हुन सक्छ । ८५ वटा खाना स्टलहरु रहनेछन् । धरानको रेष्टुरेण्टहरुको परिकारका खानाहरु पनि हुनेछन । जहाँसम्म महँगो हुन्छ भन्ने आलोचनालाई मध्यनजर गरेर हामीले यसपाली भने स्टलसँग पूर्व सम्झौता गरेका छौं । मुल्य निर्धारण गरेका छौं, यदि कसैले सम्झौताको उलंङ्घन गरेमा हामी कार्बाही समेत गर्नेछौ ।
मुख्य आकर्षण के–के छन् ?
उत्सवको मुख्य आकर्षण भनेको नै जातीय खानाको परिकारहरु हुन्छन् । साथै धरानका स्थानीय कलाकारहरुको गायन र नृत्य सहितको साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु हुनेछन् । हामीले धरानका कलाकारलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौ, यसपाली ।
धरानको सडक उत्सवमा पर्यटकहरु किन आउने के छन्, विशेष प्याकेज के छ ?
धरान सडक उत्सव नै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भएकाले यहाँ आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि उत्सव अवधीभरी टुर प्याकेज पनि बनाएको छौं । त्यसका लागि ३ वटा प्याकेज रहेको छ । हाफ डे, फुल डे र वन नाइट स्टेको प्याकेज ल्याएका छौं । टुर प्याकेजमा धरान आसपासको मठ मन्दिर , विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठा धरान, भेडेटार आसपासको क्षेत्र, नमस्ते झरना, ट्री हाउस र धरानको भ्यु टावरसम्म अवलोकन गराउनेछौ । हाफ डेको प्याकेजमा ७ सय रुपैया, फुल डेको प्याकेजमा ९९९ सय रुपैयाँ र वन नाइटको प्याकेजमा १ हजार ५ सय ५० रुपैया राखेका छौं । वन नाइट प्योकज गर्नेलाई दिनभरी घुमाएर साँझ धरान १५ को वगरकोटसम्म अवलोन गराइनेछ ।
उत्सव सम्पन्न गर्नको लागि चुनौती के छन् ?
उत्सव व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले धरान उपमहानगरपालिका, वडा समिती, इलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एसएसपी कार्यालय सबैबाट स्वीकृती लिएका छौं । त्यसैले हामीलाई सुरक्षा चुनौती अब हुने छैन । वेलुका १० वजेसम्म हामी उत्सव सञ्चालन गर्नेछौ ।
निशुल्क स्वास्थ्य शिविर र सन्तुलित आहाराको सचेतना
नामै उत्सव हो । उत्सव अवधीभरी नै खानाका परिकारहरु नै बढी हुने हुँदा बेस्सरी खाने भन्दा पनि कसरी हामीले सन्तुलित खाना खाने भन्ने ज्ञान पनि सिकाउँछौ । स्वास्थ्य नै धन भएकाले हामीले सन्तुलित खानाको लागि सचेतना कार्यक्रम नै राखेका छौं । हात्तीसार क्याम्पसका विद्यार्थीहरु र विजयपुर अस्पताल धरानले स्वास्थ्यका लागि सन्तुलित आहारको विषयमा सचेतना कार्यक्रम सहित अस्पतालले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गर्ने भएका छन् । सुगर र प्रेसर निःशुल्क रुपमा जाँच गरिने भएको छ ।
‘हाफ डे, फुल डे र वन नाइट स्टेको प्याकेज ल्याएका छौं । टुर प्याकेजमा धरान आसपासको मठ मन्दिर, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान, भेडेटार आसपासको क्षेत्र, नमस्ते झरना, ट्री हाउस र धरानको भ्यु टावरसम्म अवलोकन गराउनेछौ । हाफ डेको प्याकेजमा ७ सय रुपैया, फुल डेको प्याकेजमा ९९९ सय रुपैयाँ र वन नाइटको प्याकेजमा १ हजार ५ सय ५० रुपैया राखेका छौं । वन नाइट प्योकज गर्नेलाई दिनभरी घुमाएर साँझ धरान १५ को बगरकोटसम्म अवलोन गराइनेछ ।